fikojakojana fanaraha-maso gearbox, fikojakojana helika
boaty conveyor sy fikojakojana helika
Ahoana no hisafidianana boaty misy boaty mifanaraka amin'ny zavatra takintsika?
Azonao atao ny manondro ny katalaotintsika mba hisafidianana ny boaty na azontsika atao ny misafidy rehefa manolotra fampahalalana ara-teknika amin'ny torolàlana famoahana takelaka, haingam-pandeha amin'ny hazakazaka sy môtô sns.
Inona no fampahalalana tokony homenay alohan'ny hametrahana ny baiko mividy?
a) Karazan-dasam-boaty, salanisa, fidirana sy karazana fanondrahana, flange fidirana, toerana mitombo, ary fampahalalana moto sns.
b) Loko trano.
d) fepetra takiana manokana.
Ahoana ny fitazonana ny boaty?
Aorian'ny fanamboarana boaty vaovao amin'ny efa ho 400 ora na 3 volana dia mila ovaina ny fanovana. Aorian'io, ny tsingerin'ny fanovana ny solika dia eo amin'ny ora 4000 rehetra; azafady aza afangaro-manam-bolo isan-karazany ny marika fametahana. Tokony hitahiry fitrandrahana ampy ho an'ny trano ao amin'ny tranon-trondro ary manadihady azy tsy tapaka. Rehefa fantatra fa miharatsy ny fanapotehana na mihena ny habetsahany, ny miovaova dia tokony hovaina na hofenoina anaty fotoana.
Inona no tokony ataontsika rehefa tapaka ny boaty?
Rehefa simba ilay boaty dia aza esorina aloha ireo faritra. Azafady mifandraisa amin'ny solontena mpivarotra ao amin'ny departemantan'ny varotra ivelany anay ary omeo ny fampahalalana aseho amin'ny takelaka, toy ny boaty famaritana ny isa nomerao; fotoana ampiasaina; karazana lesoka ary koa ny habetsahan'ireo manana olana. Farany ataovy ny hetsika mety.
Ahoana ny fitehirizana ny boaty?
a) Voaro amin'ny orana, ranomandry, hamandoana, vovoka sy fiantraikany.
b) Mametraha bara hazo na fitaovana hafa eo anelanelan'ny boaty sy ny tany.
c) Ireo singa vita amin'ny fitaovam-piadiana nosokafana nefa tsy nampiasaina dia tokony hampiana miaraka amin'ny menaka manohitra ny harafesina eny ambonin'izy ireo, ary averina miverina ao anaty boaty rehefa mandeha ny fotoana.
d) Raha toa ka nitahiry nandritra ny 2 taona na efa ela kokoa aza ny boaty, azafady mba jereo ny fahadiovana sy ny simba mekanika ary raha mbola eo ilay fizarana anti-harafesina mandritra ny fizahana mahazatra.
Inona no tokony ataontsika rehefa tsy mahazatra sy misy tabataba mitranga mandritra ny fihazakazan'ny boaty.
Mety vokatry ny tsy fifampitafana eo anelanelan'ny fitaovam-pandehanana na simba ny fihary. Ny vahaolana azo atao dia ny mijery ny lubrication sy fiovan'ny tsipika. Ankoatr'izay, azonao atao koa ny mangataka ny solontenanay mpivarotra raha mila torohevitra bebe kokoa.
Inona no hataontsika momba ny fitrandraka solika?
Hatsaho ireo baoritra eny ambonin'ny habakabaka ary araho ny singa. Raha mbola mihena ny solika, dia antsoy azafady ny solontenantsika mivarotra eto amin'ny sampana mpivarotra vahiny.
Inona ny indostria ampiasain'ny kitapo ampiasainao?
Ireo boatin-tsika fitaovantsika dia ampiasaina be dia be any amin'ny faritra vita amin'ny lamba, fanodinana sakafo, zava-pisotro, indostria simika, escalator, fitaovam-pitandremana otomatis, metallurgy, tabako, fiarovana tontolo iainana, lozika ary sns.
Mividy moto ve ianao?
Manana mpamatsy motera maharitra izahay izay efa niaritra hatry ny ela. Izy ireo dia afaka manome kalitao manana kalitao avo lenta.
Inona no fizaran'ny vokatra vokarinao?
Manolotra fiantohana herintaona izahay hatramin'ny nialan'ny sambo nandao an'i Sina.
Misy fanontaniana? Araho izahay !
Mametaka ny fitaovam-piadiana mpanampy
Gear motor amidy
Fitaovana helika, Fitaovana goavam-borona, Gira fanosotra, motera vakana, Helical Gear Motors, Spiral Bevel Gear motor
Manjaitra fitaovan'ny milina olitra ny helika
Fitaovana helika, fitaovam-pandeha, môtô hozatra, Helical Gear Motors
Kitiho karazana baoritra
Fitaovana Helika, fitaovam-piadiana
Ireo karazana motera elektrika
Ny hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha
Fitaovana herinaratra, fitaovam-pandaminana, fitaovam-piadiana planeta, motera vita planeta, Fitaovana Cycloidal, Mision Spiral Bevel Gear, Motera goavambe, Motera Cycloidal
Karazan-tsarimihetsika misy sary
Fitaovana helika, fitaovan-tsoavaly Spiral, Fitaovana Bevel
Ny moto elektrika sy ny fitambaran-jiro
Sumitomo karazana cyclo
Boaty fampihenana boaty ho an'ny maotera elektrika
Boaty fantsom-borona antsokosoko